Ny DAG002 dia basy fampiasa amin'ny haingam-pandeha avo lenta 1 mba hanafoana ny vokatra 1-singa toy ny adhesive sy tsiranoka hafa. Isan-karazany ny karazana adapters sy extrusion nozzles dia hita mba hanomezana ny filàn'ny fangatahana.
Ny basy dia manana andalan-vokatra 10 mm ary mahazaka tsindry faran'izay mahery 400 bar. Ny ampahany amin'ilay basy izay mifandray amin'ny vokatra dia vy vy, ny fanjaitra dia mifono DLC ary ny tombo-kase vokatra dia PTFE. Azo apetaka amin'ny basy ny bara fanafanana raha ilaina izany.
Ny fotoana famaliana haingana dia azo miaraka amin'ny fanaraha-maso avo roa heny amin'ny fanjaitra ny fanjaitra. Izany dia miantoka fanitsiana mazava sy marina tsara ny vokatra.